Sharciga Yurub wuxuu ka ciyaaraa door sii kordhaya ee sharciga shaqada gudaha (gaar ahaan iyada oo loo marayo awaamiirta Yurub iyo sharciga kiiska labada maxkamadood ee sare ee Yurub). Dhaqdhaqaaqa mar dambe lama iska indho tiri karo tan iyo bilawgii codsiga heshiiska Lisbon (Diisambar 1, 2009). Warbaahintu waxay aad iyo aad u badan tahay in ay soo dhaweeyaan doodaha kuwaas oo ilo ku leh sharciga bulshada Yurub.
Aqoonta sharciga shaqada Yurub sidaas darteed waa qiimo dheeri ah oo loogu talagalay tababbarka sharciga iyo ficil ahaan shirkadaha dhexdooda.
MOOC-dan waxay kuu ogolaanaysaa inaad hesho saldhig aqooneed sharciga shaqada Yurub si:
si loo hubiyo hubaal sharci oo wanaagsan oo ku saabsan go'aamada shirkadda
si loo dhaqan geliyo xuquuqda marka sharciga Faransiisku aanu u hoggaansamin
Khubaro badan oo reer Yurub ah ayaa si gaar ah u iftiimiyay mawduucyada qaar ee lagu bartay MOOC, sida caafimaadka iyo badbaadada shaqada ama xidhiidhka bulsho ee Yurub.
Sharciga shaqada ee Yurub Diisambar 8, 2021Tranquillus
READ B2B ganacsiga
horeSamee fikirka muhiimka ah
socdaDhaqdhaqaaqa magaalooyinka ee Afrika